musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Iyo yakakura kwazvo inoyangarara maindasitiri epasi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Investments • nhau • Kutarisirwa • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Iyo yakakura maindasitiri inoyangarara munyika inonzi OXAGON, uye iri muSaudi Arabia.
Zvinotora chiono cheRoyal Highness Mohammed bin Salman kusimbisa iyi gicantic chirongwa ne100% simba rinowanikwazve.
Simba rakachena, zvemazuva ano zvekugovera ketani zvinhu muOXAGON kutsigira bhizinesi vanobatana
OXAGON kugamuchira mapiyona emaindasitiri kutanga muna 2022
Maindasitiri manomwe akakosha anotsigirwa nemagetsi anovandudzwa kuti atsigire kusimukira kwemaindasitiri
Yakasarudzika octagon dhizaini inotsigira NEOM's Blue Economy budiriro
His Royal Highness Mohammed bin Salman, Crown Prince uye Sachigaro weNEOM Company Board of Directors, nhasi yazivisa kugadzwa kweOXAGON, ichigadzira chikamu chinotevera chechirongwa chikuru cheNEOM uye ichimiririra chimiro chitsva chenzvimbo dzekugadzira dzemangwana, zvichibva pamazano eNEOM ekutsanangura patsva mararamiro nekushanda kwevanhu mune ramangwana.
Pachiitiko chekuzivisa nezvekugadzwa kweguta, Humambo Hwake akati: "OXAGON ichave inosimudzira kukura kwehupfumi uye kusiyana muNEOM neHumambo, tichienderera mberi nekuzadzisa zvishuwo zvedu pasi peChiratidzo 2030. OXAGON ichabatsira mukutsanangura patsva nzira yepasi rose yekusimudzira maindasitiri mune ramangwana, kuchengetedza zvakatipoteredza tichigadzira mabasa nekukura kweNEOM. Ichabatsira mukutengeserana kwedunhu reSaudi Arabia uye kutengeserana, uye kutsigira kugadzira nzvimbo nyowani yekutengeserana kwepasirese kuyerera. Ndinofara kuona kuti bhizinesi nebudiriro zvatanga pasi uye tiri kutarisira kukurumidza kukura kweguta.”
Nadhmi Al-Nasr, CEO weNEOM, akati: "Kuburikidza neOXAGON, kuchave nekushanduka kwakakosha mumaonero epasirese nzvimbo dzekugadzira. Chinotikurudzira kuona kushingairira kwevanoverengeka vatinoshanda navo vakaratidza chido chekutanga mapurojekiti avo muOXAGON. Aya mapiyona eshanduko achagadzira mafekitori, akagadziridzwa neazvino matekinoroji muhungwaru hwekugadzira, kuti awane kusvetuka kwakakosha kwenguva ino muFourth Industrial Revolution. Sezvakaita THE LINE, OXAGON richava guta rakazara rekuziva rinopa hupenyu hwakasiyana kune vagari varo. "
Inosanganisira nzvimbo yakakura mukona yekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweNEOM, nzvimbo yepakati yemudhorobha yakatarisana nechiteshi chakasanganiswa uye logistics hub inozogara ruzhinji rwevagari veguta vanotarisirwa. Iyo yakasarudzika octagonal dhizaini inoderedza kukanganisa kwezvakatipoteredza uye inopa yakaringana mashandisirwo evhu, neinosara yakavhurika kuchengetedza 95% yenzvimbo yakasikwa. Chinhu chinotsanangudza cheguta ndicho chimiro chikuru chepasi rose chinoyangarara, chinova musimboti weNEOM's Blue Economy uye kuwana kukura kwakasimba.
OXAGON inozadzisa huzivi hwakafanana uye misimboti yeMUTSARA (iyo yakaziviswa muna Ndira 2021) uye ichapa yakasarudzika kurarama zvinoenderana nezvisikwa. Iri padyo neGungwa Dzvuku padyo neSuez Canal, kuburikidza iyo ingangoita gumi nenhatu muzana yekutengeserana kwepasirese inopfuura, OXAGON ichave imwe yepasirese tekinoroji yepamusoro-soro hubs ine state-of-the-art yakabatanidzwa port uye airport yekubatanidza.
OXAGON kuseta mabhenji epasirese ematekinoroji epamberi
OXAGON ichagadzira yekutanga-yakabatanidzwa-yakazara chiteshi chepasirese uye yekugovera cheni ecosystem yeNEOM. Chiteshi, zvinhu uye nzvimbo yekutakura njanji ichave yakabatana, ichipa mazinga epasi rose ekugadzirwa net-zero kabhoni emissions, kumisikidza mabhenji epasi rose mukutorwa kwehunyanzvi uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
Iyo agile uye yakabatanidzwa yemuviri uye yedhijitari yekugovera cheni uye Logistics system inobvumira kuronga-chaiyo-nguva, zvichikonzera kuchengetedzeka-nguva yekutumira, kushanda nesimba uye mutengo-unoshanda kune vanobatana neindasitiri.
PaOXAGON's musimboti pachange pave kutorwa kwehunyanzvi hwepamusoro-soro hwakadai seInternet yezvinhu (IoT), kusanganiswa kwemuchina wevanhu, njere dzekugadzira uye dzekufungidzira, uye marobhoti, ayo ese akabatanidzwa kune network yezvizere otomatiki yekugovera nzvimbo uye kuzvitonga. ekupedzisira-mamaira yekuendesa zvinhu kutyaira zvishuwo zveNEOM zvekugadzira isina musono yakabatanidzwa, yakangwara uye inobudirira yekugovera cheni.
Zvikamu zvinomwe zvekuvandudza, zvese zvinofambiswa ne100% renewable energy
Iro guta net-zero richapihwa simba ne100% rakachena simba uye richave nzvimbo yekutungamira vatungamiriri veindasitiri vanoda kupayona shanduko kugadzira mafekitori epamberi uye akachena emangwana.
Zvikamu zvinomwe zvinoumba musimboti wekuvandudza maindasitiri eOXAGON, nehunyanzvi uye tekinoroji nyowani ichigadzira hwaro hwakakosha hwemaindasitiri aya. Maindasitiri aya ane simba risingaperi; kuzvimiririra kufamba; mvura innovation; kugadzirwa kwechikafu kwakasimba; hutano uye kugara zvakanaka; tekinoroji uye kugadzirwa kwedhijitari (kusanganisira telecommunication, space tekinoroji uye marobhoti); uye nzira dzemazuva ano dzekuvaka; zvese zvinofambiswa ne100% renewable energy.
Nharaunda dzinofanira kubatanidzwa nezvisikwa
Zvizhinji zvezvimiro zveMUTSARA izvo zvinopa kugarika kwakasiyana zvinoratidzwa mune yedhorobha mamiriro eOXAGON. Nharaunda dzinofamba, kana kuburikidza nehydrogen-powered mobility. Indasitiri inoenderera ichavakwa kutenderedza nharaunda, ichideredza nguva yekufamba uye ichipa yakasarudzika mararamiro nemasikirwo akabatanidzwa munzvimbo yemaguta.
Dzidzo, Tsvagiridzo uye Innovation kukwikwidza nzvimbo dzepasirese
OXAGON ichavandudza kugadzira hupfumi hwakatenderedzwa nenharaunda yakabatana yakavakirwa patsvagiridzo uye hunyanzvi: Kampasi yeOXAGON yekuvandudza ichaita Dzidzo, Tsvagiridzo uye Innovation (ERI) ecosystem kuti ikwikwidze nzvimbo dzepasirese dzakasimbiswa.
Kuvandudzwa kweOXAGON kuri kuenderera mberi uye magadzirirwo ari kuenderera mberi kune makuru ekugadzira nzvimbo. Zvivakwa izvi zvinosanganisira hombe yegirinhi yehydrogen chirongwa chepasi rose chinosanganisira Mhepo Zvigadzirwa, ACWA Power uye NEOM muchikamu chetatu; fekitori yakakura uye yepamusoro-soro yekuvaka yekuvaka neGulf Modular International; uye yakakura hyperscale data center mudunhu, mubatanidzwa pakati peFAS Energy neNEOM.
Iine yakanakisa-mu-kirasi yekudzora sisitimu yerudzi rwayo yerutsigiro rwevazhinji, OXAGON ichakura nekukurumidza uye kugamuchira vayo vekutanga kugadzira maroja pakutanga kwa2022.
NEOM inomhanyisa kufambira mberi kwevanhu uye chiono chekuti Ramangwana Idzva ringaite sei. Idunhu riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweSaudi Arabia paGungwa Dzvuku riri kuvakwa kubva pasi zvichikwira serabhoritari mhenyu - inzvimbo iyo bhizinesi richaronga kosi yeRamangwana Idzva. Ichave nzvimbo yekuenda uye imba yevanhu vanorota hombe uye vanoda kuve chikamu chekuvaka modhi nyowani yekurarama kwakasiyana, kugadzira mabhizinesi ari kubudirira uye kudzorera kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
NEOM ichave imba nenzvimbo yebasa kune vanopfuura miriyoni vagari vanobva kupota nyika. Ichasanganisira hyperconnected, cognitive maguta nemaguta, zviteshi nenzvimbo dzemabhizinesi, nzvimbo dzekutsvagisa, nzvimbo dzemitambo uye dzevaraidzo, uye nzvimbo dzekushanya. Senzvimbo yekuvandudza, mabhizinesi, vatungamiriri vebhizinesi uye makambani achauya kuzotsvaga, kusimudzira, nekutengesa matekinoroji matsva nemabhizinesi nenzira dzinoputsa. Vagari veNEOM vachabatanidza tsika dzepasi rose uye vanogamuchira tsika yekuongorora, kutora njodzi uye kusiyana - zvese zvinotsigirwa nemutemo unofambira mberi unoenderana nemitemo yenyika uye unobatsira mukukura kwehupfumi.